कसले गराउँदैछ महन्थ ठाकुरलाई बदनाम ? | Ratopati
कसले गराउँदैछ महन्थ ठाकुरलाई बदनाम ?
काठमाडौँ – राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका संयोजक महन्थ ठाकुर बेलाबेलामा चर्चामा आइरहने नेता हुन् ।
कहिले मधेसको पक्षमा कडा अभिव्यक्ति दिएर त कहिले राष्ट्रपति बन्दैछन् भनेर, कहिले उपराष्ट्रपति बन्दैछन् भनी चर्चामा ल्याएर उनी विवादमा तानिने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय उनी सभामुख बन्दैछन् भन्ने चर्चाले उनी फेरि विवादमा तानिएका छन् । एउटै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख रहनु हुँदैन भन्दै राजपा नेपालका संयोजक ठाकुर सभामुख बन्ने चर्चा चलेको छ । यो चर्चा अरू कुनै दलका नेताहरूले नभई राजपा नेपालकै नेताहरूले चलाएका छन् ।
काङ्ग्रेस पार्टीमा रहेको बेला पटक पटक मन्त्री बनिसकेका संयोजक ठाकुर आफ्नै नेतृत्वमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरेपछि मन्त्री बनेका छैनन् । २०६५ देखि तमलोपा पटक पटक सरकारमा सहभागी भयो तर उनले अरू–अरूलाई सरकारमा पठाए तर उनी आफै कहिल्यै मन्त्री बनेनन् ।
उनको अबको लक्ष्य मन्त्रीभन्दा माथिको पदमा जाने हो । नभए पार्टीमा बसेर काम गर्ने हो ।
उनी प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रपतिको पद ताकेर बसेका छन् । यही मौकाको फाइदा उठाउँदै उनका विपक्षीहरूले बेलाबेलामा यस्ता कुरा चर्चामा ल्याई उनलाई बदनाम गराउने प्रयास गरेको राजपा नेपालका नेता बताउँछन् ।
पार्टीका उपाध्यक्ष एवम् वृषेशचन्द्र लाल भन्छन्, महन्थ ठाकुर सभामुख बन्ने हल्ला चलाएर भ्रम फैलाउने काम गरिरहेका छन् । यो भ्रम फैलाएर कसलाई फाइदा भइरहेको छ, त्यो थाह छैन तर यो एकदमै गलत हो ।
महन्थ ठाकुर बुढा भइसके, उमेरले पनि त्यति साथ दिँदैन उनी अरू पदभन्दा बढी पार्टीमा नै बसेर जनताको सेवा गर्न चाहेको लालको दाबी छ ।
महन्थजी अब मन्त्री बन्नु हुन्न । अरू कुनै पदको लोभ पनि छैन । बाँचुन्जेल पार्टीमा रहेर जनताको सेवा गर्ने उहाँको लक्ष्य हो, सहमहामन्त्री डा.सुरेन्द्र झा भन्छन्, उहाँ अब मन्त्रीको होइन, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुनुहुन्छ ।’
बेला बेलामा उनका विपक्षीहरूले विभिन्न पदको लोभ देखाएर उनलाई बदनाम गराउने खेल गरेको नेता झाको आरोप छ । उनी भन्छन्, पार्टीमा जसले आफूलाई सेफ ठान्दैन, त्यसले बेला बेलामा उनको नाम चर्चामा ल्याउने गरेका छन् ।’
संयोजक ठाकुरका कारण को ‘सेफ’ छैन भनी जिज्ञासमा उनले कसैको नाम बताउन चाहेनन् तर उनले यति भने कि विस्तारै विस्तारै सबै कुरा खुल्दै जानेछन् ।
पार्टीमा अहिले उनको विपक्षमा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो रहेका छन् ।
पार्टीभित्र दुईटा गुट चलेका छन् । एउटा गुटको नेतृत्व संयोजक ठाकुरले गरिरहेका छन् भने अर्को गुटको नेतृत्व अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले गरिरहेका छन् ।
महन्थ ठाकुर पार्टी नेतृत्व रहेसम्म अरू कसैले चान्स पाउँदैन भनेर महतो पक्षधका नेताहरूले ठाकुरलाई कुनै संवैधानिक उच्च पदमा पठाउन चाहेका छन् र उनकै पक्षका नेताहरूले बेला बेलामा यी कुराहरू चर्चामा ल्याएका हुन्छन् ।
पार्टीका संयोजक ठाकुरलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा सभामुख आदि कुनैमा नियुक्त गरियो भने पार्टीको नेतृत्व खाली हुन्छ र त्यहाँ आफू जान पाउनुपर्छ भनी महतो पक्षले यस्तो प्रयास पटक पटक गरेको महन्थ निकट नेताहरू बताउँछन् ।
अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले अहिले संसदीय दलको नेता हुन खोजेका छन् । जबकि संसदीय दलको नेता महन्थ ठाकुर हुने निश्चित छ । पार्टीको नेतृत्व जसले गर्छ, उही संसदीय दलको नेता हुने प्रचलन छ ।
तर अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महतोले संसदीय दलको नेता आफू बन्न पाउनुपर्छ भन्दै विभिन्न ठाउँमा लबिङ गर्दै आएका छन् । महतोका पक्षमा शरतसिंह भण्डारी मात्र छन् भने ठाकुरका पक्षमा महेन्द्र राय यादव, अनिलकुमार झा, राजकिशोर यादव छन् ।
महतोले सर्वसम्मतिले आफूलाई संसदीय दलको नेता बनाइयोस् नभए लोकतान्त्रिक प्रकृया अपनाएर चुनावमा गएर नेता चयन गर्न दबाब दिइरहेको स्रोतहरूको दाबी छ । त्यही कारणले राजनीतिक दलको बैठक लम्बिँदै गइरहेको छ ।
गत फागुन २३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयोजक ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोालएर उपराष्ट्रपति पद दिएर सरकारमा सहभागी गराउन चाहेका थिए तर तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सो कुरा स्वीकार गरेका थिएनन् ।
राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारीलाई दाहो¥याइने भएपछि नन्दबहादुर पुनलाई पनि दोहो¥याउन पार्टीमा दबाब परे पनि प्रचण्डले त्यो स्वीकार गरेका थिएनन् ।
संविधान निर्माण भइसकेपछि पनि महन्थ ठाकुर उपराष्ट्रपति बन्ने चर्चा निकै चलेको थियो ।
यता, पूर्व एमाले पक्षधरहरूले महन्थ ठाकुरलाई सभामुखलाई दिने मनस्थितिमा भए पनि अध्यक्ष प्रचण्ड त्यो पक्षमा देखिएको छैन । अध्यक्ष प्रचण्ड भन्छन्, अब सभामुख, उपासभामुखहरू पार्टीका रहेनन् । उहाँहरूले पार्टीबाट राजीनामा दिइसक्नु भएको छ अनि एउटै पार्टीको हो भन्न सकिँदैन ।’
यसरी बुझ्दा यस पटक पनि ठाकुरले सभामुख पाउने सम्भावना धेरै कम छ तर उनी पटक पटक बदनाम भने हुँदै आएका छन् ।
भारतीय लोकसभा मतगणनाको प्रारम्भिक चरणमा भाजपाको उल्लेख्य अग्रता